Ekpere maka ndị anyị hụrụ n'anya nwụrụ anwụ - UniProyecta
Ekpere maka onye a hụrụ n'anya hapụrụ
Anyị achịkọtala ọtụtụ ekpere na amaokwu Akwụkwọ Nsọ ka agụpụta (ma ọ bụ na nzuzo) na ihe ndị ọzọ na -eru uju ọnwụ onye nwụrụ anwụ: nne, nna, onye ezinaụlọ, enyi. Anyị ghọtara na oge ndị a nwere ike isi ezigbo ike.
Onyenwe anyị na -anụ mkpu gị, n'oge na -adịghị anya, ị ga -enwe udo. Anyị nwere olileanya na ekpere ndị a dị ike nwere ike ịkasi gị na ezinụlọ gị obi n'ọnọdụ a siri ike.
1 Ndepụta ekpere maka onye nwụrụ anwụ
1.1 Ekpere ka mkpụrụ obi zuru ike na udo
1.2 Ekpere maka nne ma ọ bụ nna
1.3 Ekpere maka ịkwa arịrị
1.4 Ekpere maka nwanne / nwanne
2 Amaokwu Akwụkwọ Nsọ gbasara onye nwụrụ anwụ
Ndepụta ekpere maka onye nwụrụ anwụ
Ekpere ka mkpụrụ obi zuru ike na udo
Anyị na -ekele gị Onye -nwe maka ọnwụ nwanne anyị nwoke / nwanne anyị nwanyị. Anyị na -ebuli aha gị elu maka ezi ndụ o biri. Anyị na -arịọ gị, Onyenwe anyị, ka e nye gị ndụ ebighi ebi. Ma mgbe ọ ka nọ n'ubi gị, ka ndị mmụọ ozi gị metụ ihe ọ na -enweghị ike imetụ aka ọzọ. Nna, nọrọ na mkpụrụ obi ya, ka ọ zuru ike n'udo ebighi ebi zuru oke. Amen
Ekpere maka nne ma ọ bụ nna
Ezigbo Nna, ana m ekele gị maka ilekọta nna m / nne m n'oge ndụ ya n'ụwa. Ana m ekele gị maka inye ha ohere ịkpọbata m n'ụwa a, m na -ekelekwa gị maka ohere ịnweta ekpere a. A na m a rejoiceụrị ọ lifeụ na ndụ ọ na -ebi na ezi ọrụ ọ rụrụ. Onye -nwe -anyị Chineke, a na m ekpe ekpere maka mkpụrụ obi nna / nne m nwụrụ anwụ na ilekọta ya anya ka ha na -aga alaeze gị dị nsọ. Ekelere m gị maka ịnụ ekpere m, Onye -nwe, Amen.
Ekpere maka ịkwa arịrị
Onye -nwe -anyị Chineke, ị nọ n’elu, anyị, ụmụ gị dị umeala, gbuo ikpere n’ala n’ihu gị taa na nsọpụrụ. Anyị maara na ị bụ onye ukwu na ị bụ eze nke ndị eze niile. Yabụ, anyị na -arịọ gị ka ị bulie obi na mkpụrụ obi anyị elu ka anyị wee tụfuo ihe mgbu anyị, Onye -nwe. Nye anyi ike imeri onodu a. Ọ dịghị onye na -anwụ ma ị sịghị otu a, yabụ anyị na -a rejoiceụrị ọ inụ na mmeri a wee rịọ gị ka gị na nwanne anyị nwanyị / nwanne anyị nwụrụ anwụ nọrọ. Anyị na -ekele gị maka ekpere zara na n'aha Jizọs, Amen.
Ekpere maka nwanne / nwanne
Site n'ihe m na -echeta, nwanne m nwoke / nwanne m nwanyị nọnyeere m n'oge nsogbu na nsogbu niile nke ndụ. Anyị riri nri ma gwukọọ egwu, anyị na -enye ibe anyị ndụmọdụ, anyị anaghịkwa ezobe ihe ọ bụla. Ugbu a, ebe ọ na -apụla, ana m ekpe ekpere ka m chọta ndụ ebighi ebi na ọ eternalụ ebighi ebi n'ime ike gị. Ana m arịọ gị ka ị lekọta nwunye / di / ụmụ / itinye ego gị na ụwa nakwa na nlepụ anya gị anaghị agbanwe, Onyenwe anyị. Ana m ekele gị maka nnọkọ ekpere a na n'aha Jizọs, m na -arịọ gị. Amen.
Amaokwu Akwụkwọ Nsọ gbasara onye nwụrụ anwụ
(Ndị Hibru 2:14) Yabụ, ebe ụmụaka soro n'anụ ahụ na ọbara, o sonyekwara n'otu ihe ahụ, iji bibie onye nwere alaeze ọnwụ, ya bụ, ekwensu,
(Ndị Hibru 2:15) na ịtọhapụ ndị niile, n'ihi egwu ọnwụ, nọ n'okpuru ịbụ ohu n'oge ndụ ha niile.
N'ikpeazụ, na Ndị Rom, anyị nwere ike ịchọta ntụnyere ọzọ. Anyị nwere olile anya na oge iru uju a dị mkpụmkpụ na n'oge na -adịghị anya ị nwere ike nwetaghachị ndụ gị na Chineke, Onyenwe anyị:
(Ndị Rom 8: 23) na ọbụghị naanị ya, kamakwa anyị onwe anyị, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ, anyị na -asụkwa ude n'ime onwe anyị, na -eche maka nkuchi, mgbapụta nke ahụ anyị.
Categories omenala Igodo bọtịnụ
Agba na Bekee
Obodo 15 kachasị ọnụ na Spain
Inicio » omenala » Ekpere maka onye a hụrụ n'anya hapụrụ